Wadanka Malawi oo Laga Mamnuucay in meelaha dadka ku badan yihiin lagu dhuuso | Latest News	Tuesday, June 18th, 2013	Home
Wadanka Malawi oo Laga Mamnuucay in meelaha dadka ku badan yihiin lagu dhuuso
Feb 27, 2011 - jawaab	Aqrisatay:831Sida ay Baahiyeen Wakaalada Wararka Dowlada Malawi ayaa Wexey soo saartay Go”aan ay la Yaabeen Dadka kadib markii ay Mamnuucday in Lagu Dhuuso Goobaha ay bulshada ku Badanyihiin, Sida Suuqyada, Goobaha ay Bulshada ku sheekeysato iyo Basaska Dhexdooda.
Arintaan Fajaca galisay dadka ayaa waxaa Warbaahnta la’iska arko ee Wadanka Malawi ka sheegay Wasiirka Cadaalada Ninka Lagu magacaabo George Chaponda, wuxuuna Sheegay in ay fal dambiyeed tahay Bulshada Dhexdeeda oo Lagu dhex dhuuso.
Waa Cajiib, marka laga tago Go”aanka Dowlada ee ah in la maxkamadeynayo Cidii lagu helay in ay ku Dhex dhuustay bulshada ayaa hadana dhuusada sideedaba wexey Ceeb ka tahay in Meelaha ay dadku Joogaan lagu dhuuso.
” Hadii aad dareento Dhuuso Fadlan Musqusha aad hadii aadan Heli karin Xiligaasna la aad Meel ka dheer Bulshada” ayuu Yiri wasiirka Cadaalada Malawi.
Dadka u Dooda Xuquuqda aadanaha ayaa arinkaan ka hor yiimid wexeyna Dowlada Malawi ka Codsadeen in Go”aanka ay ka laabato.